Iimpawu ezingama-50 eziPhezulu ezenza ukuba iI5 ibe yinto emangalisayo | IPhone iindaba
UHenry A Lozano | | IPhone iindaba, iOS 5, Iimveliso ze-Apple, Ezahlukeneyo
Nangona iApple ibhengeze ngaphezulu kwama-200 amanqaku enkqubo entsha yokusebenza "kwenkwenkwezi" ye-IOS5, ngexesha le-WWDC khange ibhengeze ngaphezulu kwe-16, ezidweliswe kwiwebhusayithi yayo apha
Apha ngezantsi ndiza kukubonisa ezinye zazo ezingakhange zibonwe luluntu ngokubanzi:
-Imibhalo yeMacros: Eli nqaku litsha likuvumela ukuba ushwankathele ngokuzenzekelayo ukusetyenziswa kweenkcukacha rhoqo. Oku kumiselwe kuseto> Ngokubanzi> Ikhibhodi> Iindlela ezimfutshane apho iindlela ezimfutshane ziqwalaselweyo ezikhoyo
ithathelwe indawo ngumbhalo omiselweyo ngaphambili. Olu khetho lunokuba lunomdla kakhulu ukuba iApple isungula inkxaso yokuzivumelanisa nge-Icloud.
-Izaziso nge-Flash ye-LED: Efihliweyo ngokungaziwa kuseto> Ngokubanzi> Imenyu yokufikelela yile gem encinci ekuvumela ukuba ubone (kwaye uzive) xa umntu ekubiza. Ngokuqinisekileyo oku
Iya kutsala abasebenzisi beBlackberry, into ekufuneka ngokuqinisekileyo ibandakanyiwe kwi-IOS ixesha elide.
-Ukungcangcazela okwenziwa ngokwesiko: Oku kukuvumela ukuba unike iphethini yentshukumo eyahlukileyo nokuba inoluhlu lwabafowunelwa. Singenza iipateni zentshukumo.
Kwaye kwenzeka ntoni kwezinye izinto eziphantse zibe li-180? Okwangoku, sinokuqhubeka nokukhangela kuluhlu lweempawu ezili-144 ezifunyenwe yiTechZoom ngokuzimeleyo kwaye sizidibanise kwezi zilandelayo ikhonkco kwaye uqhubeke uhlaziya.
Emva koko ndiza kuzama ukukubonisa ngendlela ecacileyo eyokuqala eyi-50 ngeSpanish, ndiyathemba uyayithanda:
1. Iziko lezaziso: Iinkqubo ezintsha zokwazisa.
2. Ukuphucula izaziso phezulu kwesikrini.
3. Izaziso kwiscreen sokutshixa: Ukutyibilika kwi icon kunokuvula usetyenziso olunombuzo.
4.Ukukhetha ukukhetha isaziso kwisicelo ngasinye.
5. Umbutho wezaziso ngokusetyenziswa, ixesha. njl.
6. Imessage: Imiyalezo ebhaliweyo phakathi kwezixhobo ze-IOS5 ngeWifi okanye i-3G (ebekungafanelanga ukuba zihlekise kakhulu phakathi kwabaqhubi beefowuni)
7. I-Kiosko okanye i-Newstand: efanayo neencwadi kodwa ukugcina umrhumo kwiimagazini, kwiimagazini nakumaphephandaba.
8.Isikhumbuzo: Uluhlu olukuvumela ukuba wenze izikhumbuzo ezinxulumene nexesha kunye nendawo (enkulu)
9. I-Twitter: Ukudityaniswa kweTwitter okunxulunyaniswa neSafari, iiFoto, iYouTube kunye nokwenzeka konjiniyela ukuba baqhubeke nokwenza iiapis zokuhlaziya okanye zokwenza usetyenziso olutsha.
10. Ukusebenza kwesipili okanye ukubukela indawo yokudlala: Oku kusebenza kuphela kwi-Ipad2 eyi
ivelisa kwakhona nantoni na esiyijongayo kwi-iPad yethu.
11.Icloud: Inkonzo entsha yasimahla yokugcina kunye nokuvumelanisa
izixhobo ezinxulumene ngqo neakhawunti ye-iTunes, ethi
Inama-gigabytes ama-5 asimahla ngokupheleleyo.
12.Vula usetyenziso lwekhamera kwiscreen sokukhiya ngokwenza
Ukucofa kabini kwiqhosha lasekhaya kuya kuvula ngokuzenzekelayo ikhamera.
13.Thatha imifanekiso ngamaqhosha evolumu.
Ukusetyenziswa kweGreyidi yeKhamera ukunika ingqwalaselo echanekileyo ngakumbi kunye nokufezekisa ngcono
Ukufota. Kufuneka kuqatshelwe ukuba eli nqaku belikwiKhamera +
15.Zoom: Yenza uphawu lwepiniki kwisicelo sekhamera
ivumela ukusetyenziswa kwe-zoom.
Ukuchukumisa isikrini kwisicelo sekhamera kukuvumela
ukuphuculwa kokuvezwa kokufota.
Ukutshixa okuzenzekelayo kwe-17 kunye nokugxila okuzenzekelayo kokuhambelana okungcono.
18. Slayida ngasekhohlo ukuvula uluhlu lwekhamera.
19. Sika iifoto: Ezingafumanekiyo kwi-3GS.
Ukuphucula ithoni yombala kwiifoto, ayifumaneki kwi-iphone
21. Jikelezisa iifoto.
Ukususwa kwamehlo abomvu: Ukucima, ukulungisa iliso elibomvu ngaphakathi
23. Ifoto Stream: Via iCloud kuzo zonke izixhobo ezinxulumene neakhawunti.
24. Hlela iifoto ngaphakathi kwifolda yefoto.
Ukuhamba kwiithebhu okanye kwiiTab ngaphakathi kwe-safari (kwi-iPad kuphela)
26.Safari Reader okanye Reader: Sebenzisa i-safari njengomfundi we-RSS.
27 Uluhlu lokufundwa kwe-safari: Uluhlu lokufunda lweSafari, lisebenza ukugcina i
amaphepha ewebhu ngelixa uqhagamshelwe kwi-intanethi kwaye uwafunda ngaphandle komqondiso
28. Ukuphucuka kokusebenza ngokubanzi njengoko kuphuculwe kwi-4.3.3.
29. UkuKhangela kwaBucala, njengefirefox kunye noGoogle chrome ivumela
zulazula ngaphandle komkhondo.
Idatha evela kwiiwebhusayithi ezithile inokucinywa.
31 Sika intambo: Yiba nakho ukwenza kwaye uqalise ukusebenzisa i-idevice ngaphandle kwesidingo
ukusuka kwikhompyuter okanye kwikhompyuter ye-Mac.
32 Ngaphezulu komoya okanye ngocingo kuvumela ungqamaniso oluzenzekelayo
akukho mfuneko yokuqhagamshela isixhobo kwi-iTunes.
33. Ukuhlaziywa kwesoftware yeDelta: Hlaziya iifayile kuphela
uhlengahlengisiwe, akukho sidingo sokukhuphela yonke i-IOS (efanayo
34. Ungqamaniso lweWi-fi: Iyonke ungqamaniso kwinethiwekhi yeWi-fi.
Backup kwaye ubuyisele ngokuthe ngqo kwi-iCloud.
36.Ukuvumelanisa imisebenzi yoTshintshiselwano.
Jonga uluhlu olupheleleyo lwezicelo ezikhutshelweyo, iincwadi kunye nomculo
Ukusuka kwiVenkile yeApple kuyo nayiphi na iOS ehambelana neakhawunti.
38. Ifomathi yokubhaliweyo yokubhala ii-imeyile (ngqindilili,
akekeliswe, krwela umgca, njl.
39. Ukuphuculwa kwenkxaso ngaphandle kweintanethi kwisicelo seMeyile.
40 Ukulawula iithebhu okanye iithebhu.
41. Amandla okutsala iidilesi ze-imeyile kwi-imeyile kuye,
ikopi kunye nesihloko
42. uphando oluphuculweyo lweposi.
43. Ukubanakho ukumakisha ngeeflegi okanye iiflegi ngaphakathi kwesicelo.
44. Ukhuseleko lwe-S / MIME.
45. Iprofayile yomfanekiso weZiko leMidlalo.
46. ​​Iingcebiso ngobuhlobo kwiGameCenter.
47. Iingcebiso zeGameCenter.
48. Abahlobo abakuluhlu lwabahlobo.
49. Ukufikelela kwiVenkile yeVenkile ngaphakathi kwiZiko leMidlalo.
50. Impumelelo emitsha enjengePerks and Points.
Kwaye uluhlu luyaqhubeka kwabo banomdla wokuqhubeka bekhumbula ukuba ungaya kokulandelayo ikhonkco kwaye uqhubeke nokufumana izinto ezintsha kuluntu luphela, ndixolele ixesha elide kodwa ndiyathemba uyayonwabela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 5 » Iimpawu ezingama-50 eziphezulu ezenza i-IOS5 ibe yinto emangalisayo
Ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba yinyani ukuba i-IOS 5 ikuvumela ukuba uthumele ulwazi lwethegi ye-ID3 yomculo xa udlalwa ngeBluetooth ???
Kwam, eluncedo kakhulu ilahlekile: chaza iisiginitsha ze-imeyile ukuba sineeakhawunti ezahlukeneyo ze-imeyile; (
Ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba izijekulo ze-multitouch ezivele kwi-iOS 4.3 sele zizakufumaneka kwi-iOS 5?
Pablo, ndizifunde zonke kwaye khange ndikwazi ukuzibona.
Inyani yile, bekubonakala kum ukuba nge-ipad bazokuyibeka kodwa hayi i-iphone kwaye yinto ekufuneka beyishiyile, ndinokuqhekeka kwintolongo kwisigqibo sam sezinto ezimbalwa, kodwa enye yile, izijekulo zemultitouch ethintela ukunxiba kweqhosha lasekhaya, ndicinga ukuba kungenxa yeso sizathu, ukuze isebenzise ixesha kunye nexesha (ixesha elide ukuba) idevice kufuneka itshintshwe.
… Kwaye enye into ebilindelwe ngabantu abaninzi. Uyakwazi ukucima iifowuni nganye nganye!
Inkunkuma IOS5 sitsho
Kulungile wow ... Yonke into ibikhona ixesha elide ine-jailbreak ... YONKE INTO.
Andizukuhlaziya, andiboni sibonelelo.
Kukho into enomdla kakhulu, xa ukhetha isicatshulwa ngoku kukho ukhetho lokukufundela yona, sesinye sezizathu zokuba ndisebenzise i-JB, oku kubaluleke kakhulu xa usenza imithambo kwaye ifunda inqaku ukuze wena ngelixa uzilolonga
Gnzl, izolo ndiye kwi-iso5 kwaye yonke into ibilungile, kodwa ngequbuliso bonke abafowunelwa kwifowuni yam bebengekho, ndivumelanisa ne-iTunes kwaye akukho nto, yintoni enye endinokuyenza ngaphandle kokubuyisela kwakhona?
k iya .. akhonto inde !! kum ibimfutshane kakhulu hehe .. bendifuna ukwazi ngakumbi .. xD enkosi !!
Molo Javier, malunga nabafowunelwa ... ukuba umba unononophelo oluncinci, into yokuqala endikucebisayo kukuba wenze ikopi yogcino, oko kukuthi, kwi-ajenda ugcine ukhuphelo lwazo zonke abafowunelwa, ke qiniseka ukuba unayo icloud efakwe kuyo ikhompyuter oyisebenzisela ukungqamanisa ifowuni yakho, emva koko uye kuseto> iCloud kwaye ungeze iakhawunti yakho, ngendlela efanayo uye kwiiNkqubo ezikhethwayo> i-imeyile, abafowunelwa kunye neekhalenda> kwaye ungeze i-ID yakho kwi-iCloud, emva koko ube neefowuni ze-iPhone ngo-0 nakwi-mac, yiya kubafowunelwa kwaye ungenise bonke abafowunelwa ukusuka kugcino olwenzileyo. Okokugqibela qiniseka ukuba xa ungqamanisa ifowuni yakho kukhetho loLwazi kwi-iTunes ayiphawulwanga ukungqamanisa abafowunelwa kuba kungenjalo uya kubona ukuba bonke abafowunelwa baphindwe njani. Ndiyathemba ukuba uyasebenza kuba kufuneka ndinikele ixesha ukuyilungiselela kodwa yonke into ilungile kwaye ibaleka ngokumangalisayo.
Ewe, kubonakala ngathi zonke ziindaba ezilungileyo. Ndithenge enye yezi charger zemoto zikanomathotholo http://mipagina.1001consejos.com/profiles/blogs/15-increibles-accesorios-para kwaye kufuneka nditsho ukuba bekukho amaxesha apho indiqhubela khona ukuba ndigeze kancinci. Ndiyathemba ukuba bayayilungisa ngenkqubo entsha yokusebenza, nangona ndicinga ukuba bekunjalo ngenxa yokugubungela. Ngendlela endifuna ukuzama ngayo iIcloud entsha